Ra?isal wasaare Saacid oo canbaareeyey weerar culus oo xalay lagu qaaday Makka Al-mukarama – Radio Daljir
Nofeembar 9, 2013 3:15 b 0
Muqdisho, November 9, 2013 – Ra?isal wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon ayaa canbaareeyey qarax khasaare badan dhaliyey oo xalay lala eegtay hotelka Maka Al-mukarrama ee Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra?isal wasaaraha ayaa lagu sheegay in ay xukuumadu ka xuntahay qaraxa, isla markaasna uu ra?isal wasaare Saacid tacsi u dirayo ehelka dadkii wax ku noqday weerarkii ismiidaaminta ah ee xalay dhacay.
Qoraalka Shirdoon ayaa lagu dheleeceeyey Al-shabaab ?Waan canbaaraynaynaa weerarkan fulinimada ah. Waxaa xaqiiqo ah in weerarradan qorsheysan ee argagixiso ay ka dambeeyaan kuwo arxan-daran oo cadow ku ah qarannimada iyo horumarka Soomaaliya?
Ra?isal wasaare shirdoon waxaa uu rajeeyey in kooxda Al-shabaab aysan caqabad ku ahaan doonin dadka iyo dalka Soomaaliyeed wakhtiyada dhow.